Iskuuladii SFIga oo furmay iyo Soomaalida oo guul u caaboon | Somaliska
Maanta waxaa si rasmi ah dib ugu furmaya iskuulada laga dhigto luuqada Swedishka ee wadanka oo dhan. Soomaalida ayaa waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee hada xaadira fasalada SFIga iyadoo sanadkii la soo dhaafay ay dowlada kor u qaaday hamiga koorsadaas ka dib markii ay bilaabeen in ay lacag ku bixiyaan dhamaystirka koorsada.
Hadaba ardada Soomaaliyeed ee dhigata ama bilaabeysa bishaan ayaa u caaboon in ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee dhameeya koorsada isla markaana hore u qaataan xoogaaga ay bixiso dowlada. Dad badan oo aan la kulmay ayaa ii muujiyay sida ay ugu heelan yihiin in ay soo gabangabeeyaan koorsadaan. Qofkasta waxa uu aaminsanyahay in dhameystirka SFIga uu noqon doono furaha ay si fiican ugu dhexgali karaan Sweden.
Hadaba waxaan jeclahay dhowr qodob oo talo ah in aan u soo jeediyo ardada higsaneysa in uusan SFIgu la dhaafin deyrtaan.
1. Buugta Akhri: Anigu shaqsi ahaanteyda waxaan ka mid ahay dadka ku dhib qaba aqrinta buugaagta balse waxaa la ogaaday markasta oo aad buugaagta akhriso in ay kuu kordhayaan erayo cusub, xitaa haddii aadan turjuman madaxaaga ayay galayaan erayadaas. Marka Bibliotega ha la booqdo oo soo daynso buugta qoraalka fudud (Lättläst -LL). Ha noqdo buug ka hadlaya sheeko xiiso leh si aadan ugu caajisin.
2. Dhoolatus u samee macalimiinta: Soomaali badan ayaa ka sheegta in macalimiintu ku dhaganyihiin oo aysan imtixaanka u ogoleyn. Qaar ayaa aaminsan in haddi macalinku siidaayo ay macalimiiinta shaqo la’aan ku dhaxeyso balse arintaas ayaa ah waxba kama jiraan. Macalimiintu waa dad la soo tababaray oo la socda horumarka aad sameyneysid iyo firfircoonidaada. Haddii ay kaa dareemaan in aad tahay qof firfircoon oo wax fahmaya fasalka kuguma haynayaan. Hadaba waxaa lagaa doonayaa in aad macalimiinta dhoolatus u sameyso, waa in aad suaal kasta oo ay soo tuuraan noqotaa kan ka jawaaba. Markasta oo ay leyli kuu diraan waa in aad degdeg ku soo kala tuurtaa. Isaga ayaa macalinku marka dambe kaa qaylinaya oo ku dhibsanaya. Waxa uu hoos iska leeyahay “War kan kadeed ayuu ku galiyee yaa ku dhaafiya!!”
3. Akhriso wararka: Waa in aad la socotaa wararka iyo wargeysyada, markasta oo aad akhriso wararka waxaad sameysaa in aad kala baxdo liis erayo ah oo aad turjumaad ku sameyso ka dibna aad madaxa gashato. Markasta oo eray kuu siyaado waa horumar kuu siyaaday.
4. Soo afjar labada buug: Waa in aad soo afjartaa labada buug ee SFIga laga bixiyo ee kala ah Mål 1 iyo Mål 2. Waa in aad isku daydaa in aad meel saarto buugtaas oo aadan uga tagin hal eray oo aadan aqoon isla markaana aad fahantaa naxwaha ku jira.
5. Imtixaanku ma ahan nuucii Soomaaliya: Sida aad aragteen ama aad arki doontaan imtixaanada SFIga ma ahan nuucyadii Soomaaliya ee lagu keeni jiray wixii laguu soo dhigay. Imtixaamadaan waxay ku dhisanyihiin xaalado dhab ah oo quseeya nolosha. Sida keliya ee aad guul uga gaari kartid waa in aad horumar xaga luuqada ah sameysay. Sidaa darteed ha isku mashquulin in aad soo xafido buugta ama warqadaha ee waxaad isku daydaa in aad fahanto macnahaha iyo ujeedada guud iyo mida gaar ahaaneed.
Waa ku kaasaa.
asc wan idiin salamey dhamaan musliminta iyo soomali meel kasto ay joogan marka xiga jimcaalow waa runtaa mida ah in la dadaalo ileyn waa caqabada koowaad ama waa furaha wadankaan aan ku noolnahey waayo wey adag tahey in aad ka shaqeysato hadii aadan luqadooda aqoon wana mida iheysato oo run ahaantii halkii aan ka baraktiiga ka bilaabey ayaa u bogey dafdafteyda shaqo iyo sidaan ugu caabanahey inan shaqeysto hadii ay ahaan leheyd inaan soo xadiro waqtiga ay shaqadu bilaabaneyso amaba aan kasoo hormaraba midaasoo i dhaxalsiisey in ay ii wac wacdaan oo telkeyga ay ku qorteen meel gaara hada waxey isiiyeen week wan dhameystey hadana wey igu dareen ayadoo iskuulkiina la furey midaas ayaa caqab igu noqotey ileyn tuurtuurasho wax lahubo maahan ee wa kumel gaar so waxan u sheegey in iskuulka ley furey oo aanan sii wadi karin waa hadii ay tuurtuurashada tahey lkn hadii ay isinayaan iskuulka habeen ayan ka dhigan lahaa balse aan u soo daadago murtida ku jirta qoraalkaaga jimcaalow wallalow maxan wax barana maskax fiyowba maheynee waqti walba waxa nagu qufulan welwel jogta ah habeen iyo maalin waxan qadano waxey ku baxan biil iyo telefoon kama waheyno nolosheena caruurtii waxey naleeyihiin aabo wan kuu xiisey kan iigu yar caruurteyda ismaba garaneyno iskuulka iyo meel kasto oo aan joogo waxan ka fekeraa caruurteyda maskaxda ayey naga dileen balse waxan ku ceymanaa inaan muslimiin aan nahey oo markuu welwelka iga bato quraan ayan aqristaa oo labta ii qabojiya so bro adigana beryahan waxad moodaa inaad naga gaabisey baraarujinta xataa waa hiilo waxan halkan sxb kala ahey bahda igu fekerka ah ee ila qabta in laqaban qaabiyo mudaaharad weyn si aynu u soo bandhigno shucuurteena hadii aadan adiga welwel ku seexanin ogow walaalkaa ama walashaa ayaa ku sexato intaasna waa iga guubaabo wad ka gabisey sidii xiliyadii uu webka cusbaa bro noo garaac albaab walba noogu baaq mudaharaad iga raali noqo hadii aan qaldamey magafe waa illaah subxaanahu watacaalaa mahadsanidiin
war cad waaye, aniga waxaan ka mid ahay dadka bilaabaya hadda waxaanan jeclahay inaan ku dhameeyo six ilaa eight months insha allaah, luqado kale ayan bartey tanna kama dhib badna ayey il tahay.
jimcaalle waa talo waanaagsan, iyo rayigaagii oo aad walaalahaa ugu deeqday kuna mahadsanid ( somalidu horay ugu maah maahday cid wax ku siisa waad aragtaa balse cid wax kuu sheegta maheshid micnaheedu waa talada wanaagsani waa ka qaali san tahay hanti kasta
Dadba 10sano iska dhex jiifa SFIga oo afka barashadiisi ku noqotay jaamacd oo kale.War naftiina ha xaasidine ee xooga saara sidaad isku dabari lahayden hadi kale waligiin TOLKba iin dabo socon.Isku daya inaad dadka la hadashaan, radio dhagaystan oo markaad skuulka joogtan somali kale ha la fadhiisaniina.Dadka kale ee ajaanbika la fariiso si aad ku barbaratid af swedishka.